विन्डो Dressing। के रोज्ने?
Homeliness, भित्री डिजाइन
तपाईं आफ्नो घर मा एक उत्कृष्ट मर्मत गरे, तर एक सजावट र सामान सिर्जना गर्ने एक व्यक्तित्व आवश्यक छ। सजाय तिनीहरूले आवश्यक सान्त्वना सिर्जना सहयोगका eaves र पर्दे देखि सुरु हुन्छ।
छनौट पर्दे प्रकार
अंधा को ठीक कस्तो तपाईं मेरो घर मा हेर्न चाहनुहुन्छ थाहा गर्न, कृपया इन्टरनेट कीव पर्दे दोकान भ्रमण, यहाँ तपाईं शैलीहरू र कोठा को सजावट को सबै प्रकार पाउनुहुनेछ। कि साइट मा, तपाईं घर वा अपार्टमेन्ट कुनै पनि कोठा मा पर्दे को एक तयार सेट चयन गर्न सक्नुहुन्छ। पर्दे को चयन मा के कौशल आवश्यक छ?
सबैभन्दा भएको अपार्टमेन्ट को आधुनिक आंतरिक मा व्यापक शास्त्रीय पर्दे छ। को eaves र Draperies विकल्पहरू माउन्ट एक विशाल संख्या समकालीन डिजाइनर आकर्षित। पाश पट्टियाँ, grommets - जो एक अद्वितीय डिजाइन बनाउन fastenings छ।
आधुनिक रोमन रंग विशिष्ट उठाने संयन्त्र, विन्डो मा माउन्ट छ जो छ। फ्लैट जाले समान Folds superposed उठाने जब। सादगी र पर्दे यस प्रकारको को प्रयोग मा सजिलो आधुनिक डिजाइनर द्वारा मूल्यवान छन्।
जापानी पर्दे - अक्सर एक अद्वितीय ढाँचा धेरै शिष्ट नजर पर्दे। तिनीहरूले धेरै आयताकार canvases समावेश। आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न कपडा, तल र माथि एक कठिन सम्मिलित छन्।
रोमान्टिक अष्ट्रीया पर्दे सुन्दर तेर्सो Folds मा laces प्रयोग गर्न जाँदैछन्।
अंधा - पर्दे को सबै भन्दा आधुनिक फारम। यी हल्का-परिरक्षण संरचना दुवै ठाडो र तेर्सो डिजाइनमा हुन सक्छ।
भौतिक बनावट को विकल्प
पर्दे लागि कपडा को विकल्प आफ्नो उपस्थिति भन्दा कुनै कम महत्त्वपूर्ण छ। छनौट कपडा, यसको व्यावहारिकता र हेरचाह गर्ने क्षमता द्वारा निर्देशित। कपडे सूर्य मा लुप्त होती, त्यसैले जब घाम पक्ष अनदेखी विन्डो लागि कपडा छान्ने, को ऊतक अस्तर द्वारा निर्देशित अधीनमा छन्। कपडा बनावट मात्रा मा निर्भर गर्दछ र पर्दे को भविष्य। थोक खरिद पर्दे, आफ्नो भारी कपडे वा कपडा अस्तर सिले। ठीक कपडे प्रयोग गर्दा एक बहने छाँयामा प्राप्त।
बाक्लो पर्दा कपडे र voile पर्दे सबै क्लासिक सी गर्न।
आधुनिक रोमन रंग कुनै पनि रंग र बनावट को कपडे देखि सिलना।
विशेष प्रकाश र पारदर्शी कपडा बनेको जापानी lamella पर्दे।
सिलाई पर्दे लागि अष्ट्रीया प्राकृतिक रेशम र tulle पलिएस्टर रूपमा प्रयोग।
भान्सा लागि पूर्ण - तिनीहरूले अंधा पर्दे अन्य प्रकार संग तुलना पर्याप्त अपिल हेर्न, तर बोसो र गन्ध अवशोषित छैन भनेर सामाग्री बनेको भन्छन्।
ठीक सज्जित पर्दे कोठा सजाउनु र तपाईं आफ्नो घर मा सहज महसुस बनाउन।
सनस्क्रीन अंधा छनौट।
खेत: डिजाइन र मूल विचार
एक घर परियोजना कसरी बनाउने? सरल, छिटो, आर्थिक!
बकाइन बेडरूम: फोटो र डिजाइन विचार
चिमनी र टिभी कोठा जीवित: रोचक विचारै, सुविधा र डिजाइन सिफारिसहरू
को भित्री डिजाइन स्टुडियो छान्ने मापदण्ड
Payday: चोरी: सिस्टम आवश्यकताहरु। Payday: चोरी: रिलीज मिति, वर्णन, ट्रेलर, समीक्षा
प्लास्टिक Windows को लागि माउन्ट रोलर अन्धो रूपमा? अंधा प्रकार र तिनीहरूलाई स्थापना गर्न कसरी
यी 25 पासवर्ड मा 2015 भन्दा लोकप्रिय थिए
सबै संन्यासी को प्रतिमा - उपासनाको विश्वव्यापी तरिका
वोरोनिश पार्क "Tanais": आकर्षण, मूल्य, ठेगाना
केन्या र यसको महत्त्व को झण्डा
पानी पाइप लागि सुर्ती कस्ता प्रकारका?
जहाँ सन्दर्भ बिना खराब क्रेडिट इतिहास संग एक ऋण प्राप्त गर्न?
एक लोकप्रिय औषधीय बिरुवा-पुदीना
रोचक चलचित्र Bezrukov